>မေတ္တာပဓာန | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ဝတ္ထုတို —6Comments	October 23, 2009
အလျားအနံတော့မရှိပေမယ့် အသွားအပြန်တော့ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးက လူတိုင်းလူတိုင်း ကြားဖူးနေကြပါ။မေတ္တာတရားအကြောင်းကို ပုံနှိုင်းပြကြတဲ့ စကားလေးပါ။လူသားတွေဟာ တစ်ဦးပေါ်ကို တစ်ဦးက မေတ္တာသက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုရင် မှန်သားပြဒါးပြင်ပေါ် အလင်းကျရောက်လာလို့ တဖန်အလင်းပြန်တဲ့ သဘောတရားလိုပေါ့ မေတ္တာတရားဟာလဲ အမြဲတမ်း စတင်ပို့လွှတ်တဲ့သူဆီကို တနည်းတဖုံ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတတ်စမြဲပါ။ ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတရားတွေကြောင့် လူသားတွေ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မနာလိုဝန်တိုစိတ်၊ ခိုက်ရန်ဒေါသ ဖြစ်လိုစိတ် အရှင်းနဲ့ မေတ္တာထားခဲ့ကြလို့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေဟာ အခုလဲ ရှိနေဦးမှာပဲ။နောင်လဲ လာကြဦးမှာပါပဲ။မေတ္တာတရားရဲ့ အင်အားကြီးမားပုံကိုတော့ လူတွေအတော်များများ သိရှိခံစားနားလည်ဖူး ကြပါလိမ့်မည်။မေတ္တာတရားဟာ လူသားတွေတင်ပဲလား၊ ဒီသတ္တလောကကြီးပေါ်မှ အခြားခြားသော သက်ရှိသတ္တဝါတွေ အပေါ်မှာလဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုတွေကို ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ မြင်ကြ၊ တွေ့ကြ၊ သိမြင်ခံစားဖူးကြမှာပါ။
“တယ် ဒီခွေးမ သတိထားဟေ့ ….လူတွေကိုလဲ လိုက်ကိုက်နေတယ်။ဟဲ့ကလေးတွေ အနားမကပ်ကြနဲ့နော်။ဒီခွေးမကြီးက သားကျထားတာ၊ သူ့ကလေးတွေနားကပ်မှာဆိုးလို့ လမ်းသွားလမ်းလာ လူတကာကို လိုက်ဟပ်နေတာ။”အထက်ပါ မအေးသန်းရဲ့ ခုနှစ်အိမ်ကြား သူ့အသံပြဲကြီးနဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာများ၊ ကလေးများကို အော်ပြောပြီး သားကျပြီးကာစ ခွေးမကြီးရဲ့ လူတကာကို ရန်လိုနေမှုကို အော်ပြောရှင်းပြနေတာကို ရေချမ်းတစ်ယောက် အိမ်ပေါ်မှ အတိုင်းသားကြားနေရသည်။ဒီခွေးမကြီးကလဲ သူအရင်စံပျော်ရာ ရေချမ်းအိမ် မျက်စောင်းထိုးလောက်က ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာပင် သူ့ကလေးတွေကို မွေးခဲ့တာ ရက်ပိုင်းလေးပဲ ရှိဦးမည်ထင်သည်။
နောင်လအတန်ကြာတော့ ရေချမ်းအဖေက “ကောက်ရမမှာ ဇီးရှိလာပြီ ဧကန်န ဒီကောက်ရမ အရင်ပျောက်သွားတာ ချစ်သူအသစ်တွေ့သွားလို့ လိုက်သွားတာထင်တယ်”လို့ ရေချမ်းအဖေက ကဗျာဆန်ဆန် ကောက်ချက်ချလိုက်သည်။မကြာပါဘူး ကောက်ရမမှာ ခွေးပေါက်ကလေး လေးကောင် ပေါက်လာပြီး လမ်းပေါ်က ဈေးသွားဈေးလာတွေ သူ့ကလေးတွေ လာကြည့်မှာစိုးလို့ထင်တယ် တွေ့သမျှလူကို လိုက်ဟောင်နေသည်။ရေချမ်းတို့သွားကြည့်တော့ သူက ဘာမှမပြောဘူး ခပ်လှမ်းလှမ်းလေးမှာ သူရှေ့ခြေနှစ်ချောင်းကိုဆင်းပြီး မေးလေးတင်ကာ ဝပ်တွားပြီးကြည့်နေလိုက်သေးတယ်။ရေချမ်းအမေက“သားရေ ကောက်ရတို့မိသားစု ညကြရင်အေးနေမှာ နွေးသွားအောင် ခွေးလေးတွေအောက်ကနေ ဂုံနီအိတ်ခွံတွေ ခင်းပေးမှထင်တယ်။နောက်ပြီး သူတို့မိသားစုအတွက် လမ်းထိပ်ထမင်းဆိုင်က ထမင်းဟင်းအကျန်တွေ အမေသွားတောင်းလိုက်ဦးမယ်”။ဒါကိုကောက်ရက ရေချမ်းအမေပြောသွားတာ သူနားလည်တယ်ထင်တယ် “အူ”ဆိုပြီး ကျေးဇူးစကား တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
October 24, 2009 at 12:18 am	>ကျေးဇူးတရားနဲ့ သံယောဇာဉ်တရားကိုကောက်ရလေးရဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာတွေ့ ရပါတယ်။စဉ်းစားမိတာက သံယောဇဉ်တွယ်မိမှ ကျေးဇူးတရားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဆိုတာပါ။တွယ်မိရင် သူ့ အတွက်ပဲစဉ်းစားနေမှာပဲမဟုတ်လား။ မိဘမေတ္တာဆိုတာကလည်း မြစ်ရေတို့ လိုပဲ မြင့် ရာက နိမ့် ရာကိုပဲစီးစင်းနေတတ်တဲ့ သဘောပါလို့ ။
October 25, 2009 at 2:12 am	>ကိုချမ်းလင်းနေရေ စာမေးပွဲရာသီမို့ ကျွန်မ မရောက်ဖြစ်တာပါ။ အဖြစ်အပျက်ရော အရေးအသားပါ သိပ်ကိုကောင်းမွန်နေလို့ အချိန်မရပေမဲ့ ပြီးတဲ့အထိ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ မိဘမေတ္တာနှင့် ခွေးတွေနဲ့ လူတွေကြား သံယောဇဉ်ကို ရေးသားထားတဲ့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း နေ့အားရင် ရေးဖို့ စိတ်ကူးရလာပါတယ်။ ကောက်ရမ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
October 27, 2009 at 12:54 pm	>ဖတ်ရတာတကယ်ကြေကွဲစရာပါဘဲ အစ်ကိုရာခွေးတစ်ကောင်ရဲ့သစ္စာနဲ့ မေတ္တာတရားကိုဖော်ကျူးထားတာ ရိုးရိုးလေးပါ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကိုပီပြင်ပါတယ်ဗျာ . . . ပို့ စ်သစ်လေးတွေဆက်မျှော်နေပါမယ်အစ်ကိုရေ . . . ကိုရေချမ်းအကြောင်းစရေးတဲ့ ပိုစ်ကစပြီးလည်း အစ်ကိုလက်ရည်ပိုတက်လာတယ်လို့ သတိထားမိတယ်အစ်ကိုရေ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ …🙂
October 27, 2009 at 8:26 pm	>ကောက်ရမ အကြောင်းဖတ်သွားတယ်အစ်ကိုစိတ်မကောင်းဖူးအိမ်မှမွေးထားတဲ့ သင်္ကြန်မိုးဆိုတဲ့ကြောင်မလေးလင်နောက်လိုက်သွားတုန်းကလဲ တအိမ်လုံးစိတ်ညစ်ဖူးတယ်း)
October 30, 2009 at 6:26 am	>မိဘမေတ္တာကတော့ အမြဲ စိးလျက်ပါပဲ ကိုချမ်းရေ။
November 20, 2009 at 9:55 pm	>အရမ်းကို ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပဲ ကိုချမ်းလင်းနေ။ လူတွေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ ကြားထဲက မေတ္တာတရားတွေ ဖော်ကျူးထားတာ တကယ့်ကို ပေါ်လွင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်သွားမိတယ်။ အော် မေတ္တာတရားရဲ့ ကြီးမားပုံပဲနော်။ကောက်ရမ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ….။ခင်မင်လေးစားလျှက်
« >Go Back Home
>ဇက်ပေါ်ကဇီးသီး (နီကိုရဲ) »